eikokozaw5 – it4a
SAP BO လို့ခေါ်တဲ့ SAP Business Objects BI က Business Intelligence (BI) ပလက်ဖောင်းများအတွက် Reporting နဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ Analytics Tools များကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။ SAP BO မှာသုံးစွဲသူ (User) များအား အချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်ရန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (Analysis) များပြုလုပ်နိုင်ရန် နဲ့ အစီရင်ခံစာ (Report) များကိုဖန်တီးနိုင်ရန် Application များစွာပါဝင်ပါတယ်။ BOBJ ဆိုတာ ယခင်က SAP Crystal Server ဆိုပြီး လူသိများခဲ့တဲ့ Reporting Tool- Old Version ကနေ နောက်ပိုင်းတွေမှာ New Version အနေနဲ့ SAP Business Objects BI […]
Why S/4 HANA?
ERP, S/4HanaEnterpriseLedger, SAP
ဒီနေ့မှာတော့ SAP S/4HANA Enterprise Ledger ကိုအသုံးပြုသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာထဲက အချက်၆ချက်ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ 1. Single Source for Financeလုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးပိုင်းမှာ Financial Accounting အတွက်ရော၊ Management Accounting အတွက်ရော တစ်နေရာထဲမှာ လုပ်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Finance ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမယ့် Data တွေကလည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ Consolidation လုပ်နိုင်ခြင်း၊ Plan ဆွဲနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2. Integrated & ModuleFinance ပိုင်းအပြင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ရှိနိုင်မယ့်အခြားသော Function များ (ဥပမာ Procurement အဝယ်ပိုင်း, Sales အရောင်းပိုင်း အစရှိသဖြင့်) မှာလည်း Module အဖြစ်ပါဝင်နေမှုကြောင့် […]
Which technologies can CFO use to manage Organization’s Finance?
ERP, S/4HANA, SAP, Uncategorized
ယခုခေတ် လုပ်ငန်းအများစုက နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာတွေတွေ့ကြုံနေကြရပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေက မလိုလားအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေ (Hidden Costs) တွေကိုဖြစ်စေပြီး လုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ငွေကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်။ ပထမဆုံးအခက်အခဲကတော့ Scattered Information လို့ခေါ်တဲ့ Data တွေ၊ Information တွေပြန့်ကျဲနေခြင်းပါ။ Information တွေစုစုစည်းစည်းမရှိဘဲ ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်နေပြီး လိုအပ်တဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူပြန်ရှာလို့မရခြင်းက လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒုတိယအခက်အခဲကတော့ Batch Orientation ပါ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှာအရေးပါတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ (Real Time) အနေနဲ့ မရရှိဘဲ မကြာခဏ နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက် (Update Information) များကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းရတဲ့ (Repeatedly Manual) ပုံစံဖြင့် လည်ပတ်နေရပါတယ်။ ဒီလိုလည်ပတ်နေရတဲ့အတွက် သတင်းအချက်အလက်တွေက နာရီပိုင်း/ ရက်ပိုင်းနောက်ကျပြီးမှ Update Information ရတာမျိုး၊ တခါတလေ လနဲ့ချီပြီး Update Information […]